Mizotra saingy mihisatra ny asa fanamboarana ny « Lalan'ny atody », izay tetikasa natomboka tamin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina, fanampiana avy amin’ny governemanta Sinoa. Ao anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao dia somary nihena ny fandroson’ny asa, izay vinaina ho amin’ny volana Septambra 2021 ny fahavitany. Lalana mirefy 19 km, ary 14 m ny sakany no hatao tara, mampifandray Kaominina telo ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo, dia ny Kaominina Mahitsy, ny Kaominina Ampanotokana, ary ny Kaominina Antanetibe Mahazaza.
mardi, 04 août 2020 14:29
Asan-jiolahy: Dimy lahy nanafika tokantrano iray tao Vohidiala Ambatondrazaka
Nalaky heno ny fikotrokotrohana varavarana, raha tsy izany dia efa tafiditra an-trano ny jiolahy mirongo fiadiana toy ny antsy lava. Notsofina avy hatrany ny kiririoka ka nandositra niaraka tamin’izay ny mpanafika miisa dimy.Tavela teo ny ampahany tamin’ny fitaovam-piadiana nentin’ireo nanana teti-dratsy. Nigadona vetivety ihany koa ny Zandary nantsoina. Natao ny fanarahan-dia, saingy efa tsara fiafenana ny olon-dratsy. Ny Alatsinainy 3 aogositra manodidina ny misasak’alina hifoha talata no nitrangan’izany tany amin’ny Village Pilote Vohidiala Gara (MLA), Ambatondrazaka.
mardi, 04 août 2020 10:44
Kaominina Ambohimangakely: Mikojakoja ny lalam-pirenena faha-2
“Commune Ambohimangakely miasa ho anao”. Izay no vakin’ny soratra hita tamin’ny takelaka nipetraka tamin’iny lalam-pirenena faha-2 teny Antsahalalina, eny amin’ny toerana manakaiky ny fiviliana mankany Andralanitra iny, ny alatsinainy 3 aogositra. Nahitana vatan-dehilahy vitsivitsy manadio ny sisin-dalana sy manala ny fasika amam-pako manentsina ny tatatra manamorona ny lalana teny an-toerana. “Tsy misy ny fifanarahana manokana tamin’ny ministeran’ny asa vaventy. Ny Kaominina Ambohimangakely no tonga dia naka ny fanapahan-kevitra”, hoy ny iray tamin’ireo mpiasa.“Efa an-taonany maro no tsy nisy fikojakojana ity lalana ity. Ny olona rahateo manana fahazaran-dratsy manary fako anatin’itony tatatra itony. Ny fahavaratra anefa ity efa ho avy ihany”, hoy hatrany izy.
lundi, 03 août 2020 12:03
Brickaville RN2: Lehilahy tsy salama saina nitsoraka tao ambany kamiao mandeha
Posy bisikilety nandalo no nitsorahany voalohany, saingy afa-niala azy, nony nandalo indray kamiao iray, tsy mitondra entana, avy ao Antananarivo hiazo an’i Toamasina dia iny no nitsorahany. Tampoka tamin’ny mpamily ny tranga, tsy nisy azo nialana. Voahosin’ny kodiarana aoriana teo amin’ny faritry ny lohany ilay lehilahy tsy dia salama saina, ary maty tsy tra-drano. Teo Ambalatenina, tsy lavitry ny biraon’ny Jirama Brickaville no niseho ny loza, ny sabotsy 1 jolay tokony ho tamin’ny 8ora sy sasany maraina. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 02 août 2020 12:26
RN 12 Amborobe: Mpitondra bisikilety maty tsy tra-dano voadonan’ny kamiao mpitondra solika
Niampita tampoka ny arabe ilay mpitondra bisikilety no voadonan’ny kamiao mpitondra solika. Maty tsy tradrano ilay rangahy mpitondra bisikilety, 45 taona, nivadika ambony ambany ilay kamiao. Teo amin’ny sampanana Tsianivoa Kaominina Amborobe, Distrika Vohipeno, amin’ny lalam-pirenena faha-12 no nitranga ny loza, ny tolakandron’ny 29 jolay teo. Nitondra gazoala sy solitany 11 000 litatra avy Manakara, haterina any Farafangana ilay kamiao tra-doza. Ny mpamily irery no tao anatiny, izay naratra mafy ihany koa, ary nalefa notsaboina tao amin’ny hopitaliben’i Manakara. (Jereo Sary Tohiny)
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany 01 Aogositra 2020, tetsy amin'ny Kianja Malacam Antanimena, ny Hetsika sosialim-bahoaka ho an'ny eto Antananarivo renivohitra Faritra Analamanga. Tokantrano hatramin'ny 200 000 isa no hisitraka ny fanampiana, izay ahitana vary 1 gony isan-tokantrano, ary ireo entana sasany ilaina amin'ny fiainana andavan'andro.
Notafihin’ny andian-dahalo mirongo basy sy lefona ary pilotra ny tanànan’i Marandoha, Kaominina Andalatanosy, Distrika ambovombe Androy ny alakamisy 30 jolay tokony ho tamin’ny 07 ora hariva. Lasan’ny dahalo tamin’izany ny omby 60. Roso nanaradia avy hatrany ny Zandary sy ny Fokonolona. Nisy ny fifampitifirana teo amin’ny mpanaradia sy ny dahalo rehefa nifankatratra tao amin'ny tendrombohitra Analamitampy izay fari-piadidian’i Beraketa. Vokany, dahalo iray no lavo, omby 52 no tafaverina amin'ny tompony, raha omby 08 no maty. Tsy nisy naratra ny Zandary sy ny Fokonolona nanaradia.
Miverina manomboka androany 1 Aogositra ireo zotra anatiny, ao anatin'ny faritra Vatovavy Fitovinany, manaja ireo fepetra ara-pahasalamana amin’ny hamehana ara-pahasalamana, tsy hiparitahan’ny valanaretina coronavirus. Nofendrahana ranom-panafody ireo fiara taxi-brousse rehetra. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 28 juillet 2020 18:43
Tanibe – Mananara Avaratra: Telo lahy mpangalatra lavanila voasambotry ny Fokonolona
Tra-tehaky ny fokonolona sy ny Quartier Mobile ny mpangalatra lavanila tao Andongona Fokontany Antanambao, Kaominina Tanibe, Distrikan’i Mananara Avaratra, omaly tolakandro. Telo lahy izy ireo. Nikasa ny handositra ny iray tamin’izy ireo, saingy nalaky voasambotra ary naratra vokatr’izany. Natolotry ny Quartier Mobile ny Zandary ny harivan’io ihany ireo olon-dratsy, ary androany vao mangirandratsy dia nentina ao Mananara Avaratra hatao famotorana sy ho fiarovana ny ain’izy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 28 juillet 2020 18:34
Mahabo- Amboasary Atsimo: Kaporaly nitifitra ka nahafaty sivily zanaka sefo Fokontany
Tovolahy iray, 21 taona, no maty tsy tra-drano notifirin’ny miaramila iray avy ao amin’ny 1/RM5 Toliara, manana galona kaporaly. Tao Mahabo Centre, Distrika Amboasary Atsimo no niseho ny loza, omaly atoandro. Tsy mbola fantatra mazava ny anton’ny fitifirana nataon’ilay miaramila. Basy kalachnikov no nampiasan’ilay kaporaly nitifirana, ary bala roa no niantefa tamin’ilay tovolahy avy ao an-damosiny ka nahafaty azy, araka ny fanamarinana nataon’ny dokotera. Zanaka Sefo Fokontany ilay tovolahy voatifitra. Efa nalain’ny fianakaviana ny nofo mangatsiakany taorian’ny fanamarinana. Nanokatra fanadihadiana ny Zandary avy amin’ny Poste Fixe Mahabo.